Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nahazo tsatokazo vitsy an'isa tao Talgen i Nortal
Nortal dia nanao fifanarahana marimaritra iraisana mba hahazoana tsatokazo vitsy an'isa amin'ny fanombohana ny fiarovana amin'ny cyber i Talgen mba hanamafisana ny fahaiza-manaon'ny cybersecurity ary hanokafana fotoana vaovao any Eropa, Amerika Avaratra, ary ny GCC.
Talgen dia orinasan-tserasera izay mifantoka amin'ny tsenan'ny fiarovana amin'ny Internet sy fiarovana. Ny orinasa dia mamorona fitaovana sy serivisy ho an'ireo fikambanana lehibe manerantany hanomanana ny tenany hiady amin'ny fandrahonana amin'ny cyber sy hiantohana ny fitohizan'ny orinasa.
Raha ny filazan'ny mpanorina sy CEO an'ny Nortal, Priit Alamäe, fampiasam-bola stratejika ho an'ny orinasa hanitarana ny fitarihany eo amin'ny sehatry ny cyber, izay tena sarobidy ho an'ireo mpanjifa vaovao sy vaovao any Nortal. "Ny governemanta sy ny fikambanana manerantany dia mila vonona hiatrika fandrahonana amin'ny cyber izay miha sarotra kokoa, noho izany dia hitantsika ny fangatahana iray ary koa ny fahafaha-manao amin'ity hetsika ity," hoy i Alamäe.
"Ao anatin'ity fiaraha-miasa stratejika ity dia hanangana ekipa manam-pahaizana momba ny fiarovana an-tserasera izahay ary hitondra fahaiza-manao mivoatra amin'ny mpanjifantsika hanampy azy ireo hanalefaka ny fandrahonana sy hanatsara ny faharetana," hoy i Alamäe nanampy.
“Satria mitera-doza lehibe ho an'ny fikambanana rehetra ny fandrahonana amin'ny cyber, dia voatanisa ao anatin'ny laharam-pahamehana sy ahiahin'ireo mpitarika sy birao ao amin'ny fikambanana ny cyber”, hoy i Martin Ruubel, tale jeneralin'ny Talgen.
"Mitombo hatrany ny fikorontanan'ny fikambanana noho ny tranga cyber - ny tombana farany dia nametraka ny vola 6 tapitrisa dolara manerantany, tamin'ity taona ity fotsiny - ka ny maha-zava-dehibe ny fahafahan'ny fikambanana miverina miala amin'ny fanitsakitsahana na tsy fahombiazan'ny asa," hoy hatrany i Ruubel.
Araka ny voalazan'i Ruubel, midika izany fa ny asan'i Talgen ao amin'ity sehatra misy fitsikerana ity dia ny fananana ny haitao sy ny fahalalana hanatsarana ny fahaizan'ny cyber manangana fikambanana, ahafahan'izy ireo mahatanty ny fanafihana ary koa mampihena ny fatiantoka raha misy ny fanafihana.
“Faly be aho fa tonga anisan'ny fianakavian'i Nortal manerantany ary hiditra amin'ity fiaraha-miasa stratejika ity mba hananana ny tsara indrindra amin'ireo fikambanana roa ireo ary hanambatra ny fahaizanay hamoha fotoana vaovao,” hoy i Ruubel.